M na-ege ntị na Mmetụta Therụ Ọrụ. Ọ bụ ọrụ na-atọ ụtọ n'ezie - nkeji 60 nke 60 nkeji nke abụọ site na Whonye Bụ onye nọ na weebụ na-ekwu maka imepụta mmetụta n'ịntanetị. Enwere m ike ịbụ ntakịrị ilu na anaghị akpọ m oku ka m nyere aka, mana ka m na-ege ndị folks ndị a ntị…. Achọpụtara m na ọtụtụ n'ime ha bụ ndị jupụtara na unyi. Nke mbụ, ka ị na-agụ ihe ndepụta a, mee ihe omume ụlọ akwụkwọ ị na-arụ n'ụlọ…